Wasaaradda shaqada & shaqaalaha Puntland oo soo bandhigtay waxqabadkeeda & himilooyinkeeda. – Radio Daljir
Wasaaradda shaqada & shaqaalaha Puntland oo soo bandhigtay waxqabadkeeda & himilooyinkeeda.
Garowe, Nov 27 ? Waxaa maanta si rasmi ah u soo gabagaboobay qorshe-hawleed muddo siddeed bilood ah ay ku hawlanayd wasaaradda shaqada, shaqaalaha iyo dhallinyarada Puntland kaasoo ku aaddanaa jaan-gaynta wax-qabadka saddexda sano ee soo socda.
Jaan-goon-qorsheedkaan oo lagu soo bandhigay xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Puntland ayaa waxaa ka soo qayb-galay mas?uuliyiin iyo madax kala duwan oo ka socotay hay?adda dawliga iyo kuwa caalamiga ah ee sida gaar ah ay u wada-shaqeeyaan wasaaradda shaqaalaha iyo dhallinta iyo sidoo kale wakiillo ka socday hay?adda ururrada aan dawliga ahayn ee Puntland.
Kulankaasi maanta oo socday saacdo badan ayaa lagu soo bandhigay habka loo dhammaystiray qorshe lagu qoon-daynayey tallaabooyinka u qorshaysan wasaaradda in ay ku tallaabsado saddexda sano ee soo socda, kaasoo taageero iyo taban-taabin dhaqaale looga rabo hay?addaha caalamiga ah in ay ka gaystaan, si loogu guulaysto himilooyinka la higsanayo.
Wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Puntland mudane Cabdiweli Xirsi Cabdulle ?Indho-guran? oo ka qaybgalayaashii shirkaasi u sharraxayey hindisayaashooda qoondaysan ee lagu jaangooyey qorshe muddo ay ku hawlanaayeen, isagoo tilmaamay ujeedka kulanku in uu yahay oo kaliya soo bandhigidda qaabka loo meeleyey qorshaha muddada saddexda sano, hadda kaddiba la gudo-gali doono wax-qabadkii dhabta ahaa.
Qorshaya talogal ee wasaaraddu soo bandhigtay, loona qoondeeyey in la hirgaliyo sannadaha soo socda ayaa waxaa ugu miisaan-culus hormarinta shaqaalaha iyo ciyaaraha Puntland iyadoo kor loo qaadayo xirfaha shaqo iyo kuwa ciyaareed ee dhallinta deegaannada Puntland.
Dhidbidda iyo dhiraan-dhirinta lagu joon-goonayey qorshaha saddexda sano, waxaa wasaaradda ka caawiyey hay?adda UNDP oo sidoo kalena lagu wado in ay qayb ka noqoto meel-marinta damaca iyo hindisayaasha meelaysan.